Anyị niile maara na HTC họọrọ Android dị ka sistemụ arụmọrụ nke ya smartphones ma Mac bụ nditịm ike ka iOS, sistemụ na a na-eji Apple si iPhone. Ijikọ HTC ka windows bụ nnọọ mfe ma dị mfe - nnọọ plọg n'ime eriri USB na play. Ma otu bụ bit esiri Mac n'ihi ọkwọ ụgbọala nke.
Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, gị mkpa jikọọ HTC ekwentị na Mac. Ka dị nnọọ azali ajụjụ abụọ. Gịnị ka ị ga-eme mgbe ị na-agbanwe ekwentị gị ma ọ n'ụzọ ụfọdụ furu efu na ekwentị mkpanaaka gị? Ma ọ bụ mgbe i kwalite gam akporo version? Na ndị na ọnọdụ ị ga-mmekọrịta gị HTC na Mac. Ma, i nwere ike hapụ gị mkpa data. Dị ka e nwere dịghị ụzọ ọzọ site na nke ị nwere ike jikọọ gị HTC ekwentị kpọmkwem Mac, ị ga-na-enyemaka nke ọzọ na ngwá ọrụ na-eme nke a. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-atụle anọ ọzọ ngwá ọrụ ndị ị pụrụ iji mmekọrịta HTC na Mac.
Part 1. Gịnị bụ HTC mmekọrịta Manager maka Mac
Part 2. mmekọrịta HTC on Mac na HTC mmekọrịta Manager
Part 3. Nsogbu na HTC mmekọrịta Manager maka Mac
Part 4. Top 3 Alternative ka HTC mmekọrịta Manager maka Mac ka mmekọrịta HTC na Mac
HTC mmekọrịta Manager maka Mac bụ a free ngwa, mepụtara HTC na-eme ka ọ dịkwuo mfe ka mmekọrịta gị niile media na site na kọmputa gị na gị HTC ekwentị. Na HTC mmekọrịta Manager ị nwekwara ike mmekọrịta niile kọntaktị gị, kalịnda ihe, ibe edokọbara na akwụkwọ dị ka mma. Ihe niile bụ ihe n'enweghị kwadoo na njikere-emelitere ekwentị gị.
Atụmatụ nke HTC mmekọrịta Manager na-depụtara n'okpuru:
1.View ma jikwaa media on HTC ekwentị site na kọmputa
Agagharị ma jikwaa music, foto na vidiyo na ekwentị gị nakwa dị ka na kọmputa gị.
Import iTunes listi ọkpụkpọ site na gị na kọmputa na HTC mmekọrịta Manager.
Play music, videos site na iji wuru na-media ọkpụkpọ.
Nyefee iPhone photos, ederede ozi, kọntaktị, na ndị ọzọ ka gị na HTC ekwentị.
Mbubata niile music, foto na vidiyo si gị HTC ekwentị gị na kọmputa
Import akwụkwọ na kọmputa gị na ekwentị gị
Detuo họrọ music, vidio, na foto site na kọmputa gị na ekwentị gị
3.Backup ma weghachi
Ndabere gị HTC ekwentị gị na kọmputa otú i nwere ike mfe weghachi gị ndabere na otu ekwentị ma ọ bụ ọzọ HTC ekwentị.
4.Sync playlist na data
Mmekọrịta music listi ọkpụkpọ na data dị ka kọntaktị na kalịnda n'etiti ekwentị gị na kọmputa gị.
Mac kọmputa na-Intel Processor
Ram - 512MB ma ọ bụ Higher (na-atụ aro)
1024x768 ma ọ bụ elu-mkpebi video nkwụnye na nyochaa
100MB nke free diski ike ohere
USB 2.0 ma ọ bụ karịa
Mac OS X 10.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị version
Microsoft Office maka Mac 2011
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye HTC mmekọrịta Manager maka Mac
Download HTC mmekọrịta Manager installer si HTC nkwado center saịtị. Ẹkedori installer na-eso ndị dị mfe na ihuenyo ntụziaka.
Nzọụkwụ 2: Gbaa HTC mmekọrịta Manager na jikọọ na HTC na kọmputa
Mgbe echichi, jikọọ gị HTC ekwentị gị Mac na ọnọ eriri USB. HTC mmekọrịta Manager maka Mac ga-akpaghị aka na-emeghe. Ọ bụrụ na HTC mmekọrịta Manager maka Mac adịghị amalite na-akpaghị aka, na-amalite ya aka. Ozugbo HTC mmekọrịta Manager malitere, ọ ga-amalite syncing-akpaghị aka.
Họrọ Home taabụ na-ele ejikọrọ HTC Ngwaọrụ. Ị pụrụ ịhụ na ngwaọrụ onwunwe dị ka HTC ngwaọrụ ụdị, mmekọrịta akụkọ ihe mere eme, Android version, HTC Sense version, na software nọmba.
Nzọụkwụ 3: mmekọrịta Photos
Pịa na Gallery taabụ. Ugbu a, ị nwere ike ịme nchọgharị nchekwa ma nke gị na kọmputa gị HTC ekwentị. Pịa akụ mụbaa ma ọ bụ daa
Ka izipu faịlụ a faịlụ site na kọmputa na ekwentị gị dị nnọọ na-ahụ na faịlụ na ihe album na pịa HTC akara ngosi ekwentị n'okpuru faịlụ.
Ka izipu a faịlụ site na HTC ekwentị na kọmputa ahụ na image, nri-pịa ya ma họrọ Detuo na Computer wee họrọ otu dị na album ma ọ bụ mepụta ọba ọhụrụ izipu na mbiet.
Nzọụkwụ 4: mmekọrịta Music
Pịa na Music taabụ ma họrọ Music Ntọala na n'aka ekpe. Pịa na Ngosipụta ịgbakwunye music faịlụ site nchekwa na PC gị na ekwentị gị.
I nwekwara ike iji mmekọrịta Manager na-akpaghị aka mbubata faịlụ site na iTunes ma ọ bụ Windows Media Player ka HTC mmekọrịta Manager.
Q1. Nwere ike na-agba ọsọ HTC mmekọrịta Manager Installer na Mac
Azịza: Gaa gị System Mmasị na mgbe ahụ họrọ "nche & Nzuzo" na ala. A ga-enwe otu nhọrọ ịhọrọ isi mmalite na kọmputa gị ga-ekwe ka ngwa ọdịnala na-arụnyere si. I nwere ike ịhụ ugbu a na "App ụlọ ahịa na mata mmepe" na-ahọrọ. Ugbu a ịgbanwe ntọala ka "All isi".
Q2. Apụghị playback video faịlụ na HTC mmekọrịta ufene
Azịza: HTC mmekọrịta Manager nwere ike igwu video faịlụ na formats: 3GP, 3G2, WMV, na MP4 (video codec: H.264). Ị chọrọ nwụnye kwesịrị ekwesị codec na kọmputa gị maka ịkpọ niile video Koodu na formats on HTC mmekọrịta Manager.
Q3. Apụghị jikọọ ekwentị m na kọmputa
Biko ego na-esonụ:
Ego ihu igwe USB na-nyeere ma ọ bụ.
Ị kpọghee ekwt ekwentị gị na ihuenyo ọ bụrụ na ọ na-ekpochi.
Download ọhụrụ version nke na-agụnye ngwaọrụ ọhụrụ ọkwọ ụgbọala.
Akwado Mac OS X
1. Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) $39.95 Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, na 10,9
2. Android File Nyefee Free Mac OS X 10.5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Unlimited - $199.95 Mac OS X 10,8 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Wondershare MobileGo maka Android Pro (Mac) syncs gị HTC ekwentị gị Mac OS X. Ị nwere ike ndabere ihe niile na gị HTC ekwentị site na iji ngwá ọrụ a enweghị ihe ọ bụla hassle. I nwekwara ike weghachi họrọ ma ọ bụ niile kwadoo elu faịlụ na otu click. Ọ nwere ike ịbụ oké usoro ihe omume music na video enthusiasts. A usoro, ị nwere ike ozugbo nyefee music si iTunes ka Android igwe ma ọ bụ mbupụ ya si HTC ntị ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. I nwekwara ike ibudata, wụnye, iwepụ na ndabere gị ngwa na batches. I nwekwara ike izipu ma zaghachi ozi ederede na nkwado ndabere na mpaghara ha dị ka .txt faịlụ.
Ị nwere ike ndabere kọntaktị, SMS, Kalinda, oku na ndekọ, na ngwa site gị HTC ekwentị. I nwekwara ike weghachi họrọ ma ọ bụ niile kwadoo-elu data ke otu click.
Kpọmkwem nyefee music si iTunes ka Android ekwentị, ma ọ bụ mbupụ ya site na ekwentị gị iTunes.
Send ìgwè ozi ederede site na PC gị.
Ndabere nile ozi ederede ma ọ họrọ mkpa eri ka a .txt faịlụ na kọmputa gị.
Wụnye na iwepụ mmasị ngwa ọdịnala na PC.
Import na mbupụ music, vidio, na photos na site na gị HTC ekwentị.
2.Android File Nyefee
Android File Nyefee bụ usoro ihe omume maka Mac OS X. Ọ e mepụtara Google, otú ị pụrụ ịdabere na a software. Ọ nwere ike na-efego gị HTC ekwentị dị ka ihe mpụga ike disk Mgbe ejikọrọ na gị Mac. Ị nwere ike iji ya na-ele na nyefee faịlụ n'etiti gị Mac na HTC ekwentị. Ijikọ Android ekwentị gị Mac dị mfe. Dị nnọọ jikọọ HTC ngwaọrụ a na eriri USB na-abịa na gị HTC ekwentị na malite nchọgharị ekwentị gị dị ka ihe USB diski ike.
Ugwu Android ekwentị dị ka onye na mpụga ike disk.
Nyefee faịlụ ruo 4GB na oge ma ọ bụ site gị Mac.
Mfe echichi na ime.
Ahu nagide Media Nyefee Protocol (MTP) efego Android ngwaọrụ na Mac OS X.
SyncMate maka Mac enye gị ohere mfe agbanweta faịlụ n'etiti gị Mac na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ndị ọzọ na kọmputa, obere ngwaọrụ, mobile ngwaọrụ, na online akaụntụ dị ka Google, Dropbox na iCloud akaụntụ. SyncMate bụ eleghị anya nanị ihe ngwọta na-enye ohere syncing Mac na otutu ngwaọrụ n'out oge. Ya mere, ị na-adịghị ga-azụ ọtụtụ syncing ngwọta mmekọrịta gị Mac na HTC ekwentị. E nwere abụọ nsụgharị dị - free version na ọkachamara version. The free version ga mmekọrịta kasị mkpa data - kọntaktị na kalenda. The ọkachamara version nwere ike na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Mmekọrịta gị na Mac na otutu ngwaọrụ n'out oge - Android ngwaọrụ, ụdị ọ bụla nke iOS ngwaọrụ, ndị ọzọ Macs, ọ bụla MTP ngwaọrụ, na ndokwasa nchekwa.
Mmekọrịta na online akaụntụ - mmekọrịta data na iCloud nchekwa, Google akaụntụ ma ọ bụ Dropbox.
Ọtụtụ mmekọrịta nhọrọ - kalenda, Nchetara, Ndi ana-akpo, Safari ibe edokọbara, iTunes, iPhoto.
Na-data na gị na ngwaọrụ ọhụrụ na Autosync.
Na-akwado OS X Mavericks.
Mụrụ mmekọrịta, otú ahụ ngwa window ga emekpala.
Comparison nke 4 software dị ka ha isi atụmatụ
Nkwado Auto mmekọrịta
Mmekọrịta na otutu Ngwaọrụ Ụdị
Mmekọrịta na Online Akaụntụ
Ugwu ekwentị Dị ka Mpụga diski ike
Mmekọrịta na iTunes
HTC mmekọrịta Manager maka Mac Ee Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị Ee Ee
Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) Ee Ee Ee Ọ dịghị Ee Ee Ee
Android File Nyefee Ọ dịghị Ee Ọ dịghị Ee Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị
SyncMate Ee Ee Ee Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị Ee
Freemake Video Downloader maka Mac
> Resource> Mac> Top 4 Software Ime HTC mmekọrịta na Mac